प्रदेश खबर – Page 300 – दाङ खबर
Jun12018 by DangkhabarNo Comments
नमूना विद्यालयलाई रु एघार लाख अनुदान
दाङ, जेठ १८ । छनोट भएका नमूना विद्यालयलाई दाङ राप्ती गाउँपालिकाले रु एघार लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । सो गाउँपालिकाका शिक्षा समितिको बैठकले उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाले श्री मावि मौरीघाट, शंकर मावि पिपरी, सरस्वती आधारभूत विद्यालय छोट्की सिसहनिया र नवप्रतिभा आधारभूत विद्यालय पाखापानीलाई नमूना विद्यालयका रुपमा छनोट गरिएको छ । नमूनाका रुपमा छनोट भएका प्रत्येक विद्यालयलाई बालविकास कक्षा व्यवस्थापन, प्रयोगशाला व्यवस्थापन, खेलकूद मैदान, चिल्ड्रेनपार्क निर्माण कार्य र परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागिरु ११ लाखका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेको गाउँ शिक्षा समितिका सदस्य सचिव राजेन्द्रकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । बैठकले राप्ती क्षेत्रका विद्यालयमा गर्मी मौसममा बिहानी सत्रमा कक्षा सञ्चालन हुँदा पठनपाठनमा असहजता र विद्यार्थी हित नहुने हुँदा दिवा कक्षा सञ्चालन गर्न सबै व
पाल्पा, जेठ १८ । रम्भा गाउँपालिका–४, हुमिनको धारादी वनमा बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका १२ जनाको सनाखत भएको छ । प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज पन्तका अनुसार मृत्यु हुनेमा तानसेन नगरपालिका–४ का विष्णु बज्राचार्य र कृष्णबहादुर बोहोर, तानसेन– २ का लोकनाथ ढकाल, तानसेन– ३ का वसन्ती खाँड, देवेन्द्रलाल प्रधान, कृष्णमान बज्राचार्य, छत्रमान शाक्य र सुुशीलप्रसाद श्रेष्ठ, तानसेन– ६ का दुर्गाबहादुर सारु र गीता बुढाथोकी तथा तानसेन बजारका सचिन बज्राचार्य र कमला कार्की रहेका छन् । रामपुरको अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा निस्केको तानसेनको लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको टोली चढेको लु२ख ९७५ नं को बस आज बिहान पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–४, हुँमिनको धारादी वनमा दुर्घटनामा परेको हो ।
रुकुम, जेठ १८ । रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा पढ्दै गर्दा विद्यार्थी मुर्छा पर्न थालेपछि एक साताका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ । बाँफिकोट गाउँपालिका–१, पिपल लगिमको जनएकता आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी मुर्छा पर्न थालेपछि बन्द गरिएको हो । केही दिनदेखि यहाँका ४० जना विद्यार्थी मुर्छा पर्न थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य पवनकुमार चन्दले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अन्य विद्यार्थीसमेत बिरामी पर्ने डरले विद्यालय बन्द गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पढ्दै गरेका विद्यार्थी एक्कासि मुर्छा पर्ने, ब्युँझिएपछि विद्यार्थीको टाउको र हातखुट्टा दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने र रुनेजस्ता लक्षण देखिने गरेको छ । गत मंगलबार र बुधबारमात्रै मुर्छामा परेका करीब २० जना विद्यार्थीको उपचार भएको विद्यालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य चौकी पीपलका अहेब खगेन्द्र शर्मा नेतृत्व
बुटवल–पाल्पा सडक खण्ड, पहिरो पार गर्ने क्रममा १ जना बेपत्ता
बुटवल, जेठ १८ । सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–पाल्पा सडक खण्डको हेडबक्समा खसेको पहिरो पार गर्ने क्रममा १ जना बेपत्ता भएका छन् । पाल्पाको दोभान हुँदै बुटवलतर्फ आइरहेका गोपाल रेस्मी सम्पर्कविहीन भएको दोभान प्रहरी चौकीका सई वनारसी गुप्ताले बताए। रेश्मी पहिरोमा पुरिए वा सुरक्षित अवस्थामा कतै छन् भन्ने यकिन हुन नसकेको प्रहरीले बताएको छ। सई गुप्ताका अनुसार रेश्मी सम्पर्कविहीन भएकोबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पालाई जानकारी गराइसकिएको छ। उनले पाल्पाबाट प्रहरीको थप टोली आउनासाथ खोजीकार्य तत्काल सुरु गरिने जानकारी दिए ।
पाल्पा, जेठ १८ । पाल्पाको हुमिनमा बस दुर्घटनामा परेको छ । बिहान करिब ९ बजे भएको सडक दुर्घटनामा केही हताहती भएको बताइएको छ । बस सडकबाट झन्डै १५० मिटर तल खसेको छ । लु २ ख ९७५ नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको पाल्पा प्रहरीले जनाएको छ । तानसेनबाट रामपुर जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा परेको हो । प्रहरीले घटनाको पुष्टी गरे पनि थप विवरण आउन बाँकी रहेको जनाएको छ । अहिले उद्दारको काम भइरहेको छ ।
रोल्पा, जेठ १८ । बृहत् साहित्य सम्मेलनअन्तर्गत राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा देशभरका १५ जना कवि छनोटमा परेका छन् । यसरी छनोट हुनेमा काठमाडौँका अमि प्रिन्स, दोलखाका अशोक नेपाल, रोल्पाका कमल विवश मगर र संगीत मगर, बाग्लुङका गिरी श्रीस मगर, सोलुखुम्बुका गणेश खतिवडा, रुपन्देहीका देशबन्धु आचार्य रहेका छन् । यसैगरी छनोट हुने अन्य प्रतियोगीमा गोरखाका निशान निष्कर्ष, लमजुङका प्रज्वल अधिकारी, अछामका लक्ष्मण संगम र वीरेन्द्र जैसी, रुकुम पूर्वका समीर गौतम, सिन्धुपाल्चोकका सुरेश बुढाथोकी, पाल्पाका सुष्मा श्रेष्ठ र बाँकेका हेमन्त शिशिर रहेको मूल आयोजक समितिका संयोजक डिवी टुहुरोले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगिताका लागि ११४ जनाले आवेदन दिएकोमा निर्णायक मण्डलले १५ जना छनोट गरेको आयोजकले बताएका छन् । प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई नगद रु ३५ हजार, पदक र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने भएको छ । यसैगरी द्धितीय,
क्रिक्रेट मैदानको पर्खाल निर्माणमा मतभेद
दिवाकर पोख्रेल, देउखुरी, जेठ १८ । लमहीस्थित निर्माणधिन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानको दक्षिणतर्फ बन्दै गरेको पर्खालको विषयमा धेरैले चासो राखिरहेको बेला सम्बन्धित सरोकारवालले आवश्यकता अनुसार नै पर्खाल निर्माण कार्य अघि बढेको बताएका छन् । क्रिक्रेट मैदानका निर्माणका लागि करोडांै रकम खर्च गरेको लमही नगरविकास समितिले अहिले भइरहेको क्रिकेट मैदानको दक्षिण क्षेत्रमा टेवा पर्खाल, माटो फिलिङ र मोटर खरिदको काम मैदान अत्यावश्यक भएको बताएको छ । नगर विकास इञ्जिनियर तुलसीराम अर्यालले अहिले भैरहेको काम क्रिकेट मैदानको नियम बिपरित नभएर आवश्यकताको आधारमै भएको बताउनुभयो । वर्षातको समयमा पानीले क्रिकेट मैदानबाटै माटो बगाएर लैजाने हुँदा पनि क्रिकेट मैदानको संरक्षणका लागि भइरहेको काम अति आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी देउखुरी क्रिकेट क्लवले पनि अहिले भइरहेको काम क्रिकेट मैदानका लागि आवश्यक रह
जति खुल्छन्, त्यति चल्छन् : रेष्टुरेण्टहरु केहि वर्ष यता खानाको परिकार र खाने शैलीमै परिवर्तन
नवीन अभिलाषी, दाङ, जेठ १८ । केही वर्ष पहिले र अहिले नेपालीहरुमा खाना खाने प्रचलनमा परिवर्तन आएको छ । मानिसहरुको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले उनीहरुमा दैनिक खाना तथा खाजा खाने प्रचलनमा समेत परिवर्तन आएको छ । खानाको स्वाद र परिकारमा आएको विविधताले बजारमा फरक फरक सेवा सुविधा दिने गरी रेष्टुरेन्ट तथा खाजाघरहरु सञ्चालन भएको छन् । ‘केहि वर्ष पहिलेसम्म मानिसहरुमा पेट भर्नका लागि मात्रै खाना खाने प्रचलन थियो । अहिले भने मानिसहरु पेट भर्नको लागि नभई स्वाद, स्टाइल र स्वास्थ्यको लागि खाना खाइरहेका छन्’, घोराही सहिदगेट नजिकै रहेको आईपार्कका सञ्चालक नरेश विकले भन्नुभयो, ‘अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तै दाङमा पनि खाना खाने शैलीमा परिवर्तन आएको छ ।’ केहि वर्ष पहिलेसम्म सामान्यतया खाजा नास्ता भन्ने बित्तिकै समोसा, जेरी, पुरीदेखि चाउमिन र ममको स्वाद मान्छेको जिव्रोले महसुस गथ्र्यो । करिव ८ वर्ष पहिले स्थापना
May312018 by DangkhabarNo Comments
दाङ, जेठ १७ । बालबालिकाहरुमा हुने कुपोषण हटाउन घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ मा जाउलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । वडाको मुना टोलमा गठित आमा समूह र स्वयंसेविकाको आयोजनामा विहिबार जाउलो खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ का अध्यक्ष लछीन प्रसाद बुढामगरले जाउलो खुवाउने कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको हो । एक वर्ष देखि ५ वर्षसम्मका एक सय पन्ध्र जना बालबालिका रहेको टोलमा सम्पूर्ण बालबालिकाहरुलाई जाउलो खुवाउनुका साथै आमाहरुलाई जाउलो बनाउन सिकाइने कार्यक्रम रहेको सहरी स्वास्थ्य केन्द्र घोराही–१६ की प्रमुख टोपा वलीले जानकारी दिनुभयो । वडालाई कुपोषण मुक्त बनाउने अभियान थालिएको भन्दै वडाध्यक्ष बुढामगरले वडाका सम्पूर्ण टोल विकास संस्थामा गठित आमा समूह र स्वयंसेविकाहरुलाई उक्त कार्यको जिम्मा लगाएको जानकारी दिनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको सहयो
एकै दिनमा दुई बलात्कृत
रुकुम जेठ १७ । रुकुम पश्चिममा आज एक बालिका र एक युवती बलात्कृत भएका छन् । आठबीसकोटकी बालिकालाई सोही गाउँका १४ वर्षीय किशोरले आफ्नै घरमा बलात्कार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय आठबीसकोटले अभियोग लगाएको छ । यस्तै सानीभेरीकी युवतीमाथि सोही गाउँपालिका दुई युवाले बलात्कार गरेकाले प्रहरीले पक्राउ गरी करणी मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
Previous 1 … 299 300 301 … 323 Next